JUNKWARE ဖယ်ရှားရေး TOOL ကိုအတွက် ADWARE REMOVE - အရင်ကဆိုရင်များအတွက် - 2019
မလိုချင်တဲ့အစီအစဉ်များ Junkware ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုဖယ်ရှားခြင်း
ထိုကဲ့သို့သောခြိမ်းခြောက်မှုများ၏တိုးတက်မှု, Malware နဲ့ Adware များ၏အရေအတွက်နှင့် ဆက်စပ်. ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးတူရိယာတဦးမလိုချင်တဲ့နှင့်အန္တရာယ်ရှိအစီအစဉ်များနှင့် browser ကို extensions တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် utility ။ Junkware ဖယ်ရှားရေး Tool ကို - အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတိုက်ဖျက်ဖို့အခြားအခမဲ့နှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများ, ယေဘုယျအားဖြင့် Malwarebytes Anti-Malware နှင့် AdwCleaner ကျရှုံးငါ့ကိုအကြံပေးရှိရာကိစ္စများတွင်ကူညီရန်နိုငျသော။ ဒါ့အပြင်ခေါင်းစဉ်အပေါ်: ထိပ်တန်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖယ်ရှားရေး Tool ကို။
စိတ်ဝင်စားစရာက, Malwarebytes ကုမ္ပဏီတသမတ်တည်း Adware များနှင့် Malware နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အထိရောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ဝယ်ယူ: ၎င်းတို့၏တောင်ပံအောက်မှာအောက်တိုဘာလ 2016 ခုနှစ်တွင် AdwCleaner ပြောင်းရွှေ့နှင့်အချို့သောအချိန်များအတွက်ကြောင်းမီနှင့်ယနေ့ Junkware ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကလုံးဝအခမဲ့တည်နေကြလိမ့်မည်နှင့် "ပရီမီယံ" မူကွဲဆည်းပူးပါဘူးမျှော်လင့်ကြပါစို့။
မှတ်ချက်: သူတို့ကစကားလုံး trojans နဲ့သို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်၏ပကတိအသိထဲမှာမကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နှင့်အလားအလာမလိုချင်တဲ့ software ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် utility, များစွာသော Anti-virus software ကို "ကိုကြည့်ပါ" မဟုတျကွောငျးခြိမ်းခြောက်မှုများရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားပစ်ရန်အသုံးပြုကြသည်: တိုးပြောင်းလဲမှုအိမ်မှာတားမြစ်ကြောင်းမလိုချင်တဲ့ကြော်ငြာအစီအစဉ်ကိုဖေါ်ပြခြင်း စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ်က default browser ကို "Non-ဖြုတ်" browser များနှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာ။
Junkware ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုအသုံးပြုခြင်း
JRT အတွက် malware ကိုရှာပါနှင့်ဖယ်ရှားမယ်အသုံးပြုသူကိုမဆိုအထူးသဖြင့်အရေးယူဆိုလိုပါဘူး - ညာ utility ကိုစတင်ပြီးနောက်မည်သည့် Key ကိုနှိပ်, အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ရေးများ၏အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူတစ်ဦး console ကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
နှိပ်ပြီးနောက်, အစီအစဉ်ကို Junkware ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုတသမတ်တည်းနှင့်အလိုအလျောက်အောက်ပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်
ဒါဟာ Windows ကိုအမှတ် restore ဖန်တီး, ပြီးတော့တနည်း scan ဖတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြိမ်းခြောက်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ JRT.txt စာသားကိုအစီရင်ခံစာအားလုံးဝေးလံခေါင်သီအန္တရာယ်ရှိတဲ့သို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲတွေကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
ငါ၏အစမ်းသပ်မှုအတွက်, (ငါပုံမှန်အသုံးပြုသူများ၏စစ်ဆင်ရေးတက်ကြွလာသည်နှင့် install ဘာနီးကပ်စွာအတိုင်းလိုက်နာမထားတဲ့) ကိုလေယာဉ်မှူးလက်ပ်တော့, အတော်ကြာခြိမ်းခြောက်မှုများတွေ့ရှိခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်ဖိုလ်ဒါမိုင်းလုပ်သား cryptocurrency အတွက် (သောပုံ, အခြို့ကတခြားစမ်းသပ်မှုတွေ၏သင်တန်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်) တဦးတည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တိုးချဲ့အချို့ registry ကို entries တွေကို, သူတို့အားလုံးကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည် Internet Explorer ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုမှခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်သူမသငျသညျ (ကလူသိများတဲ့ရုရှားစာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုအနေဖြင့်အချို့သောဆော့ဖ်ဝဲဖွယ်ရှိသောအရာ) ကိုသုံးပရိုဂရမ်အချို့ကန့်ကွက်တွေ့လျှင်, သင်လျှင်အလိုအလျှောက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ restore အချက်သုံးနိုငျ program ကိုစတင်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: ရမှတ် (တူညီတဲ့အရာယခင်ဗားရှင်းအတွက်) Windows 10 ကို Restore ။
ခြိမ်းခြောက်မှုများ၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ထိန်းချုပ်မှု AdwCleaner (ငါ့ကိုဦးစားပေးဖယ်ရှားရေးကိရိယာတခု Adware) ကဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ရလဒ်အနေနဲ့ကဖိုင်တွဲများမေးခွန်းထုတ်စရာ browser များနှင့်အညီအမျှမေးခွန်းထုတ်စရာတိုးချဲ့အပါအဝင်အနည်းငယ်အလားအလာမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်း, ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပြုလုပ် JRT မှထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. မဟုတ်ပေမယ်မဟုတ်ဘဲပြဿနာကို (ထို browser မှာဥပမာအားဖြင့်, ကြော်ငြာတွေ) ဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သလျှင်ပင်, ထိုကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆေးမှုများအပို utility ကိုဖျော်ဖြေဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တဦးတယောက်တည်းကပိုအရာ: ပို. ပို. အန္တရာယ်ရှိအစီအစဉ်များကိုသူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကိရိယာများ, အမည်ရ, Malwarebytes Anti-Malware နှင့် AdwCleaner ၏လုပျငနျးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်ကြသည်။ သူတို့ဒေါင်းလုတ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားသို့မဟုတ်မစတင်နိုင်, ငါ Junkware ဖယ်ရှားရေး Tool ကိုကြိုးစားရန်အကြံပြုပါသည်။
//ru.malwarebytes.com/junkwareremovaltool/: JRT တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် (: ကုမ္ပဏီ၏ယခုနှစ် JRT ထောက်ပံ့ရပ် 2018 ခုနှစ် updated) မှလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ် download လုပ်ပါ။